कीर्तिपुर प्रकरणमा ज्यान गुमाएका शम्भुको वस्तविकता सुन्दा आखा रसाउछ,किन घरवेटीले यस्तो गरे (भिडियो हेर्नुहोस) « Etajakhabar
कीर्तिपुर प्रकरणमा ज्यान गुमाएका शम्भुको वस्तविकता सुन्दा आखा रसाउछ,किन घरवेटीले यस्तो गरे (भिडियो हेर्नुहोस)
शम्भुले बाच्नको लागी धेरै दुख गरे । कैले कहाँ कैले कहाँ भौतारिए परिवार पाल्नको लागि । गाडीको सहचालक देखी फलफुल सम्म बेचे । सुख दुख गरेरे छोराहरु पढाउदै थिए तर कस्तो दिनम किर्तिपुरको त्यो घरमा बस्न पुगेछन आखिर तेही घरम ज्यान गयो शम्भुको । उनको परिवार आज शोकमा परेको छ तर कसरी गुजारा चलाउने र तीन छोराको लालनपालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले श्रीमतिलाई अब सताउन थालेको छ।
यो परिवार शुक्रबार नै नयाँ कोठामा सरे तर पनि त्यहाँ बस्न सकेका छैनन्। शम्भु कि श्रीमतीले भनिन आफूलाई न्याय र परिवारको लालनपालनका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताइन्। हाम्रो सम्पत्तिका नाममा केही छैन। भिडियो हेर्नुहोस
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन। गीत बनाएरै ५० लाख भ्याए, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो हेर्नुस)
११ मंसिर २०७७, बिहीबार १०:४८
रमेश प्रसाइ र कल्पना दाहाललाइ प्रश्न तपाइहरुको विवाह हुन्छ त ? कल्पनाको जवाफ सुनेर सब चकित (भिडियो हेर्नुहोस)
के साच्चै ज्याति मगर लाहुरेसंग प्रेममा छिन् ? आफैले सङ्केत यस्तो दिईन् (भिडियो)
१० मंसिर २०७७, बुधबार १९:२९